एनसेल एप् क्याम्प फेरि हुँदै - आवेदन खुला
Aakar August 12, 2015
नेपालकै सबै भन्दा ठूलो मोबाईल एप् प्रतियोगिता, एनसेल एप् क्याम्प – फेरि आयोजना हुने भएको छ । एनसेलले मगंलवार देखि एनसेल एप् क्याम्प २०१५ को विधिवत सुरुवात गर्दै ईच्छुक सहभागीहरूका लागि आफ्ना आईडिया पेश गर्न आवेदन खुला गरेको हो।
प्रतियोगिताको आधिकारिक वेबसाईट एनसेलएपक्याम्प डट कम, मा गएर ईच्छुक प्रतियोगिहरूले आफ्नो टिम र एप् आईडिया वेबसाईत मार्फत दर्ता गर्न सक्छन् । एनसेल एप् क्याम्प २०१५ मा खेल तथा मनोरञ्जन, स्वास्थ्य, पर्यटन, र उपयोगिता गरी चार वटा विभिन्न विधाहरू छुट्याइएको छ ।
सन् २०१४ मा जस्तै, एनसेल एप् क्याम्प २०१५ पनि चरणगत रूपमा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो चरणमा, आवेदन परेका सम्पूर्ण प्रतियोगिहरू मध्ये उत्कृष्ट १५० वटा आईडियालाई क्षमता अभिवृद्धि तालिममा सहभागि गराईनेछ । दोस्रो चरणमा, हरेक विधाबाट ६ वटा उत्कृष्ट एप् - अर्थात् कुल २४ टिमलाई - अन्तिम चरणका लागि छनौट गरिनेछ । सोही उत्कृष्ट २४ बाट चार ‘विधा विजेता’ र एक ‘मुख्य विजेता’ को घोषणा गरिनेछ ।
हरेक विधाका विजेताले रु.२ लाख ५० हजारको नगद पुरस्कार जित्नेछन् भने मुख्य विजेताले थप रु. ५ लाख जित्नुको साथै विदेशमा हुने यस्तै किसमको कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर समेत प्राप्त गर्नेछन् ।
इच्छुक मोबाइल एप् डेभलपर तथा उत्साहीहरुले चार मध्ये कुनै एक विधामा आफ्नो टिमलाई निशुल्क दर्ता गराउन सक्नेछन् . प्रतिस्पर्धामा भाग लिन ईच्छुक प्रतियोगिहरूले असोज ३ गते मध्यान्न १२ बजे सम्ममा आफ्ना आईडिया पेश गरिसक्नु पर्नेछ । सहभागीहरूले एन्ड्रोइड, एप्पल आईओएस, विन्डोज, एसएमएस, जेटुएमई लगायत कुनै पनि प्ल्याटफर्ममा एप् निर्माण गर्न सक्नेछन् ।
गत वर्ष भएको एनसेल एप् क्याम्प २०१४ मा प्रारम्भिक चरणमा कुल ४५७ एप् आईडिया प्राप्त भएको थियो र आईसिटि फर अग्रिकल्चर (एप्’को नाम: आईएफए कृषि) मुख्य बिजेता र कृषि विधाको बिजेता बन्न सफल भएको थियो । त्यस्तै सेन्टिनेप, रितिरिवाज, र लिपि (द स्क्रिप्ट) क्रमशः कर्पोरेट सल्युसन, शिक्षा र पर्यटन विधाका विजेता बनेका थिए ।
➤ आकारपोष्ट एन्ड्रोइड एप् डाउनलोड गर्नुस्